Mari-nehupfumi, 19 Nyamavhuvhu 2019
Muvhuro 19 Nyamavhuvhu 2019
Gweta raishe ntabazinduna nhlanhlayamangwe ndiweni kana kuti Ishe Felix Ndiweni akwira kudare repamusoro reHigh Court nhasi kunopikisa mutongo wavakapihwa wekuti vagare mutirongo kwemwedzi gumi nemisere.
Sangano idzva remagweta rinonzi Zimbabwe Institute of Compensate Law Trust kana kuti Zimclaw Trust rinoti rakazvipira kuona kuti varwere vose vakatyorerwa kodzero dzavo pakurapwa varipwa.
Nhasi paramende yatanga kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro perimwe remabhiri ekushandura mutemo wekufambiswa kwemashoko, weAIPPA.
Bato rinopikisa reMDC rakundikana kuratidzira nhasi mushure mekunge dare ramejastiriti ratenderana nemapurisa kumisa kuratidzira uku.
MDC neZanu-PF Zvotatsurana neNyaya yeKuratidzira
Munyika hamusisina kugadzikana kubva bato reMDC zvarazivisa kuti riri kuda kuratidzira murunyararo uku bato reZanu-PF richitsika madziro richiti kuratidzira hakufanire kuenderera mberi.